Mogadishu Journal » 2018 » February » 10
Mjournal :-Saraakiisha Ciidamada dowladda Soomaalia ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab in ay soo weerareen qeybo ka mid ah Afgooye. Taliyaha Ciidamada Booliska Afgoye ayaa sheegay in Shabaab ay soo weerareen meel banaanka ka ah Magaalada. Waxaa uu...
In a bid to cut off the flow of funds to ISIS, the United States has announced fresh sanctions against three individuals and three companies, including a Somali national, for allegedly providing material support to the militant group. The U.S. Department of the Treasury’s Office...
A 35-year-old man who pleaded guilty to being a member of Al-Shabaab terror group six years ago, will now serve 15 years in jail after the Court of Appeal quashed a life sentence imposed on him. Elgiva Bwire Oliacha was lucky that the prosecutor during his trial failed to table...
Mjournal :-Nin horay loogu eedeeyay inuu ka tirsanaa Al-shabaab una dhashay dalka Kenya ayaa xukunkii lagu riday laga qafiifiyay. Elgiva Bwire Oliacha, oo 35 jir ah ayey Maxkamad ku taalla Kenya xabsi daa’in ku xukuntay lix sano ka hor kaddib markii lagu helay in uu ka tirsanaa...
Mjournal :-Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa guddi baaritaan u saaray kiiska dad barakacayaal ah oo dhammaadkii sanadkii tagey xoog looga saaray dhul ay deganaayeen. Guddoomiyaha Gobolka ayaa faray...
Mjournal :-Tottenham Hotspur ayaa galabta kula ciyaareysa kooxda ay xafiiltamaan ee Arsenal garoonka Wembley Stadium oo ay si ku meel gaar ah ugu ciyaarto kooxda Spurs. Labada kooxood ayaa markii ugu dambeysay ku kulmay Wembley Stadium kulan katirsanaa quarter-final-ka FA Cup...
Mjournal :-Maamul goboleedka Koofur Galbeed ayaa markii u horeysay ka hadlay wararka sheegaya abaabulka dagaal ee uu Mukhtaar Roobow ka wado deegaano ka tirsan Koofur Galbeed. Wasiir kuxigeenka Amniga Maamulka Koofur Galbeed C/risaaq Cabdi Aadan ayaa sheegay inay ka war hayaan...
Mjournal :-Dowladda Maraykanka ayaa jimcihi maanta sheegtay in ay cuna-qabateyn ku soo rogtay saddex qof iyo saddex shirkadood oo ka hawlgala,Philippines,Turkey iyo Soomaaliya,kuwaasoo lagu eedeeyay in ay tageeraan mintidiinta Daacish. Waaxda Maaliyadda Maraykanka ayaa qoraal ay...
Mjournal :-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxyo, xalay lagu weeraray hoyga Muqdisho uu ka degan yahay Maxamed Abuukar Jacfar oo mar soo noqday Gudoomiyihii Degmada Hawlwadaag, iminkana ah Sarkaal ka tirsan hay’adda Nabad Suggida Somaliya. Qaraxyada oo ahaa bambooyinka...